2021 - Barnyar Barnyar
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် ဗုဒ္ဓဟူးသားသမီးများသည် ယေဘူယျအားဖြင့် အမှန်တရားကို နှစ်သက်ကြပြီး တစ်ယောက်ထဲ နေထိုင်ရခြင်းကို မြတ်နိုးတက်ကြပါတယ်။ ဘယ်လောက်ပဲ စိတ်ညစ်နေပါစေ ကိုယ်ရဲ့ မိတ်ဆွေ သူငယ်ချင်းများ ပျော်ရွှင်လာအောင် အဆင်ပြေအောင် ကူညီပေးတတ်ပါတယ်နော်…. တစ်ခါတလေမှာ သူငယ်ချင်းများအပေါ် နွဲ့ဆိုး ဆိုးပေမဲ့ ရစ်တတ်ကြပေမဲ့ အနစ်အနာ အရမ်း ခံတတ်တဲ့ စိတ်ကြောင့် […]
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် တနင်္ဂနွေဆိုတာက ရက်သတ္တပတ်တစ်ခုရဲ့ ပထမဆုံးနေ့ဖြစ်ပြီး အဲ့ဒီနေ့မှာမွေးဖွားတဲ့သူတွေဟာ လမင်းတစ်စင်းလိုမျိုး၊ ကြယ်တွေလိုမျိုး လင်းလက်တောက်ပချင်ကြသူတွေပါ။ အရာရာကို သာမန်အနေအထားလောက်နဲ့ မကျေနပ်နိုင်ဘဲ အကောင်းတကာ့အကောင်းဆုံးဆိုတဲ့အရာတွေကိုပဲ နှစ်သက်မက်မောကြသူတွေပါ။ ကိုယ့်အားကိုယ်ကိုးတယ်၊ ဂုဏ်ယူဝံ့ကြွားလေ့ရှိတယ်၊ လူမှုအဖွဲ့အစည်းထဲမှာလည်း ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် ယုံကြည်ချက်အပြည့်ရှိတဲ့သူတွေဖြစ်ကြပါတယ်။ လုပ်ငန်းခွင်အပြင် အခြားသောနေရာတွေမှာပါ လူတိုင်းက တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေကို အထူးတလည်အာရုံစိုက်ရလေ့ရှိပြီး တနင်္ဂနွေသားသမီးတွေရဲ့ပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်း သာမန်လှုပ်ရှားသွားလာနေတဲ့လူတွေအပြင် […]
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် A သွေးလေးတွေဟာ သွေးအမျိုးအစားတွေထဲမှာ အလျှို့ဝှက်ဆုံးသွေးအမျိုးအစား ဖြစ်ပါတယ်။ အပြင်ပန်းမာကြောတယ်လို့ထင်ရပေမယ့် တကယ်တမ်းအတွင်းစိတ်အရမ်း နူးညံ့တဲ့ A သွေးလေးတွေအကြောင်းကို ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ် (၁) အေသွေးလေးတွေဟာ အရမ်းကိုပွင့်လင်းတဲ့သူတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် မသိတဲ့သူတွေက သူတို့ကို ဒေါသကြီးပြီး အပေါက်ဆိုးတယ်လို့ ထင်တတ်ကြပါတယ်။ အမှန်ကတော့ ပွင့်လင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်။ (၂) အေသွေးလေးတွေဟာ […]
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် O သွေးတွေက ရှေးရခင်ကတည်းက အခုချိန်ထိ လူမှု အတိုင်းအဝိုင်းမှာတော်တော်အရေးပါလေ့ရှိတယ်။ O သွေးတွေက အမဲလိုက်တော်တဲ့ဘိုးဘွားတွေကို အမွေဆက်ခံထားတယ်လို့သိရတယ်။ သူတို့ရဲ့ထူးခြားတဲ့အမူအကျင့်တွေက ဘိုးဘွားတွေ အမဲလိုက် တဲ့အခါသုံးတဲ့ ရှာဖွေစူးစမ်းပြီး လေ့လာ စမ်းစစ်တဲ့အကျင့်ကိုအမွေဆက်ခံထားတယ်လို့ ယူဆရတယ်။ O သွေးတွေက အရမ်းထူူးချွန်တဲ့အရည်အချင်းတွေကိုပိုင်ဆိုင်ထားတာတော့ အမှန်ပါ။ သူတို့ဟာ တခြားသွေးပိုင်ရှင်တွေထက်ပိုပြီး […]
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် လက်ဖဝါးပြင် နှစ်ခု စလုံးမှာ “X” လက္ခဏာလေး ပါရှိပါက ခေါင်းဆောင်ကောင်းများ ဖြစ်တက် ပါတယ်။ ဒီလို လက္ခဏာ ပါဝင်တဲ့ သူတော်တော်များများက အောင်မြင်တဲ့ လူကြီး လူကောင်းတွေဖြစ်တက်တယ်။ လူသားအားလုံးနဲ့ ဆက်ဆံရေးမှာ ကောင်းမွန်တယ်။ ဘဝမှာ အောင်မြင်ကျော်ကြားမှု့တွေနဲ့ပြည့်စုံနေတက်တယ်။ ရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်း ကြည့်ကောင်းတယ်။ အချိန်ကို […]
Unicodeဖြင့်ဖတ်ရန် မွေးနေ့နံနက် စောစောတွင် ဆွမ်းတော် (၉)ပွဲ၌ ၁။အုနိးသီးတစ်စိတ် ၂။သကြားတစ်ဇွန်း ၃။ဆီစိမ်ထားသော လက်ဖက်သန့်သန့်တစ်ပုံ ၄။အခွံနွာပြီးသား ငှက်ပျောသီးတစ်လုံးစီ ဆွမ်းကိုးပွဲတွင် ထည့်ပါ။ ပထမဆွမ်းပွဲကို ဘုရားလှူပါ။ဆွမ်းပွဲအနီးတွင် ဖယောင်းတိုင် အကြီးတစ်တိုင်ထွန်းညှိပူဇော်ပါ။ ကျန် (၈)ပွဲကို အထက်ဝိဇ္ဇာကြီးများကို လှူပါ။ဆွမ်းပွဲရဲ့အလယ်မှာ ဖယောင်းတိုင် (၁)တိုင်စီ ထွန်းညှိပူဇော်ပါ။ ပြီးလျှင် […]
Unicode ဖြင့်ဖတ်ရန် ခုပဲ သင့် ရဲ့ ညာလက်ဖဝါးကို ဖြန့်ကြည့် လိုက်ရအောင်.. နံပါတ်ဘယ်လောက်လဲ.. ခုပဲ ညာလက်ဖဝါးနဲ့ အဖြေရှာ ရအောင် ကိုယ့်ရဲ့လက်ဖဝါးကို ကြည့်ပြီး ဘယ်လို လူမျိုးဖြစ်မလဲဆိုတာကို ကြည့်ရအောင်နော် (၀၁). ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားသောသူ၊ ခေါင်းမာသောသူ ရည်ရွယ်ချက်ကြီးမားပြီး ပညာရှင်တစ်ယောက်ကို လေးစား အားကိုးခံရမည့်သူပါ။ […]
စနေ သားသမီးတွေက လူ့ဘဝကို စရောက်လာပီ ဆိုကတည်းက စိတ်ကြီးတတ် ကြပါတယ်။ ဒေါသဖြစ်ပီဆိုရင်လည်း အရာဝတ္ထု တခုခုနဲ့ ကိုယ့်အသားကို နာကျင်အောင် လုပ်တတ်တယ်။ပြောချင်တဲ့ စကားကို သွယ်ဝိုက် မပြောတတ်ဘဲ တိုက်ရိုက် ပွင့်ပွင့်လင်းလင်း ပြောတတ်တာ စနေပါ။ အစွဲအလန်းကြီးတယ်။ အမှတ်တရတွေကို သတိရနေတတ်တယ်။ ကိုယ့်အပေါ် ကောင်းတဲ့လူ […]
တစ်ယောက်ဆိုတစ်ယောက်ပဲ သစ္စာရှိရှိ ချစ်တတ်ကြတာ သောကြာ ကိုယ့်ချစ်သူအပေါ်မှာအပြင်ပန်းက ဂရုမစိုက်သလို နေတတ်ပီး အမြဲတမ်းတွေးပြီးပူပန်ပေးတတ်တာ သောကြာ ဝမ်းနည်းတတ်တဲ့စိတ်ကိုအပြင်ကိုထုတ်ပြလေ့မရှိပဲစိတ်ထဲကပဲ ကျိတ်ပြီးဝမ်းနည်းနေတတ်တာ သောကြာ ဖစ်လာသမျှအရာရာကို ရင်ဆိုင်ရဲသလိုဖြစ်မလာသေးတဲ့အရာတွေကိုလဲကြိုပြီးစဉ်းစားတတ်လေ့ရှိတာသောကြာ အပြင်ပန်းကြည့်ရင်မာနကြီးတယ်လို့် ထင်ရလောက်ပေမဲ့ တကယ်တမ်းပေါင်းကြည့်မှ ပေါတောတောလေးမှန်းသိရတာသောကြာ စိတ်ကူးယဉ်ခြင်းကို မက်မောပြီး တခါတလေတစ်ယောက်ထဲပဲအေးအေးဆေးဆေးနေရတာကို သဘောကျတာသောကြာ စိတ်ရှုပ်ရမယ့်အရာတွေကို သိပ်မတွေးပဲ အမြဲတမ်း […]